Lego Star Wars 75314 Bad Batch Attack Shuttle ၏တည်ဆောက်မှုတွင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်
06 / 05 / 2021 06 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 945 Views စာ0မှတ်ချက် 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း, Hans Burkhard Schlömer, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego Star Wars, Lego စနစ်, Lego Technic, LEGO.com, Star Wars, Star Warsဖြေ, စံနစ်, နည်းပညာ, The Bad အသုတ်လိုက်
75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း ထွက်ခွာartပိုကြီးတဲ့အဘို့အစံကနေ s ကို Lego Star Wars လုံးဝအုတ်နှင့်ပြား၏လုံးဝနီးပါးပါဝင်သည်ဟုအားဖြင့်အစုံ။
ဘယ်မှာအများဆုံး? Lego Star Wars သင်္ဘောအချို့အဆင့်ကိုထည့်သွင်း နည်းပညာ, ဆင်းသက်ဂီယာတပ်ဆင်ထားရှိမရှိ, လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ် - Ultimate Collector စီးရီး -Up ကိုဖြစ်ရပ်အတွက် - အရေးပါသော, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအဓိကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်, 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း ပို။ ပင်ရိုးရာစနစ်အဆောက်အ ဦး အတွေ့အကြုံကမ်းလှမ်း။
၎င်းသည်ပစ္စည်း၏ဒီဇိုင်းပညာရှင် Hans Burkhard Schlömer၏ပြောကြားချက်အရဖြစ်သည် StarWars.com ငယ်ရွယ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစွန့်လွှတ်။ မရနိုင်သော ၉၆၉ အပိုင်းအစတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်မှာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သော်လည်းကစားရန်အလားအလာများစွာရှိနေသေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုမိုကြီးမားသော (UCS series) အစုံသည်များသောအားဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် internal frame တစ်ခုလိုအပ်လေ့ရှိသည် Lego နည်းပညာ သူတို့ကိုတည်ငြိမ်ပြီးလုံလောက်စွာခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ Play-theme set တွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအလေးချိန်နည်းတာကြောင့်များသောအားဖြင့်ဒီပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
“ လွန်းပျံမှာအတောင်ပံတစ်ချောင်းရဲ့အဆစ်တွေသာသုံးပြီးဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာသင်တွေ့ရလိမ့်မယ် နည်းပညာ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကိုအတွေ့အကြုံများစွာရှိစေခြင်းဖြင့်တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်း။ ကောင်းပြီ, အများအားဖြင့်ပြား! အတွင်းခန်းကစားကွင်းသို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ရန်လွန်းပျံကိုအပြည့်အဝဖွင့်နိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအရေးကြီးသည်။
သင့်အတွက်ထိုတည်ဆောက်မှုကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည် 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်လွှတ်တင်မည် ကြိုတင်မှာယူမှု အဆိုပါ set ကို, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်ရုံမှာတောင့်တကြည့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ် ပုံရိပ်တွေပြခန်း.
← LEGO ဒီဇိုင်နာများသည် ၇၅၃၁၄ အဘယ်ကြောင့်မသိဘဲမကောင်းသောအသုတ်လိုက်တိုက်ခိုက်မှုလှည့်ကွက်၌အမြန်စက်ဘီးများပါ ၀ င်သည်
75314 Bad Batch Attack Shuttle သည် LEGO အတွက်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲဖြစ်သည် Star Wars →